Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiyaha oo gudashadii Xajka ka dib kula shiray jaaliyadda magaalada Jiddah
Gudoomiyaha oo gudashadii Xajka ka dib kula shiray jaaliyadda magaalada Jiddah
Gudoomiyaha JWXO Adm. Maxamad C. Cismaan ayaa markuu gutay waajibaadkii diiniga ahaa ee Xajka shir balaadhan kala qayb galay jaaliyadda Sacuudiga magaaladda Jiddah 15kii bisha. Shirkaa oo ahaa mid taariikhi ah oo ku soo beegmay xilli barakaysan ayaa waxaa isugu yimid jahliyada Somalida Ogadeniya ee Jeddah halkaasoo ay ku soo dhaweeyeen Gudoomiyaha Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya Admiral Maxamed Cumar.
Sida uu ku soo waramay hogaanka warfaafinta jaaliyadda Sacuudi Caraabiya shirkan ayaa ahaa midkii ugu horeeyey ee noociisa ah oo lagu qabto Jeddah oo la odhan karo wuxuu ahaa shir xiiso gaar ah leh marka laga eego jawigii shirka, wakhtiga shirka iyo farxaddii dadka wajiyadooda ka muuqatey. Shirkaa xiisaha leh ayaa jaaliyadda u suurto galisay inay horfadhiistaan Gudoomiyaha JWXO oo qaarkood maqal mooyee aanay muuqaal arag.
Gudoomiyaha iyo waftigii la socday oo ka soo kicitimay magaalada Makka si ay uga qayb galaan shirka ayaa markay soo galeen madashii shirka waxaa lagu salaamay sacab iyo qaylo xamaasad leh. Ka soo qayb galayaashii shirka oo intooda badani ay sugi la’aayeen aragtida Gudoomiyaha ayaa markuu gudoomiyuhu soo galay waxay bilaabeen istaag iyo sacab aan kala go’ lahayn.
Warbixin gaaban oo ku saabsan jahliyada Jeddah iyo kaalinta ay halganka kaga jiraan oo uu soo jeediyey gudoomiyaha jahliyada Jeddah Cabdiraxman Cabdullahi Dayl ka dib waxaa wacdi aad loogu qushuucay goobtii ka soo jeediyey Sheekh Da’uud Caydid Guleed. Sheikh Dauud ayaa wuxuu dadkii u soo jeediyey hadalo muhiim ah oo halganka ku saabsan oon dadkii goobta joogay dhaqso maskaxdooda uga bixi doonin. Sheekh Daa’uud wuxuu dadkii ku adkeeyey in dagaal adag iyo jid dheer loo diyaar garoobo oo guntiga dhiisha la iskaga dhigo.
Ka dib waxaa hadalkii la wareegay gudoomiyaha JWXO Admiral Maxamed Cumar oo warbixin qodo dheer oo wejiyo badan leh iyo xogag hoose oo ku saabsan halganka iyo tabar darada cadowga ka soo jeediyay shirka. Gudoomiyuhu wuxuu dadkii u sheegay in awooda jabhadu korodhay mida cadowguna yaraatey, in gudo iyo dibad shacabku gacmaha is qabsaday lagana soo horjeestay taliska dhigya cabka ah iyo daba dhilifkooda. “ Gumaysiga muddo yar baa u hadhay ee waa inaan tashuushka iyo sheekooyinka khiyaaliga ah dhag loo dhigin. Waa in midnimada la xoojiyaa oo kala faquuqa iyo kala qaybinta laga feejignaado. Hal ku dhigeeno waa midnimo, iskutashi iyo mintidnimo” Sidaas waxa yidhi gudoomiyaha. Marti sharaftii madasha fadhiday oo aad uga maqsuuday warbixintii gudoomiyaha ayaa ahaa kuwo aan shacabka marna kala joojin.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay sheikh Axmed Makaahiil oo ka mid ah culimada magaca ku leh Makka. Sheikh Axmed wuxuu dadkii u soo jeediyey sheeko yar oo xiiso leh oo uu kaga waramayey dhibka halganka ama jahaadku leeyahay, wuxuu sheikh Axmed sheekaddii ku bilaabay sidan: “baribaa waxaa jirey nin maskiin ah oo xoolo adduunyo 20 neef oo adhi ah ka leh. Maalin maalmaha ka mid ah yuu ninkii la kulmay wadaad meel muxaadaro ka jeedinaya oo wax bixinta ka hadlaya iyo sida sadaqadu xoolaha u badiso. Wadaadkii baa wuxu yidhi qofkii neef xoolo ah bixiya illaahay 10 buu uga dhigi, kii 10 bixiyana illaah 100 boqol buu uga dhigi. Ninkii maskiinka ahaa baa fakaray oo yidhi oo haddii aan 20 ka neefba bixiyo sow 200 oo neef heli mayo. Xisaab ayuu u fadhiistey markii uu dood dheer naftiisa la yeeshayna wuxuu talo ku soo gooyey inuu 20 neef bixiyo oo sadaqaysto si uu 200 oo neef u helo. Ka dib markuu 20 neef bixiyey ayuu ninkii xeraddii 20 neef gali jireen oo madhan iska horfadhiistey. Ninkii oo is leh tolow goormay 200 ee neef iman oo xeradhii adhiga ku hor daalay ayuu shuban iyo daacuun xumi ku dhacay.
Ninkii baa naftiisa u yaabay ka dib illaahay buu baryey. “Illaahow waxba 200 boqol oo neef ha i siinine shubanka uun iga bogsii. Ninkii oo shubankii la il daran oo xeradii adhiga hor kuududa ayaa waxaa irida illaah uga soo galiyey wiil uu dhalay oo 200 oo neef oo adhi ah wata oo jahaad uu asxaabtii la galay qayb ahaan uga soo heley. Hadaba ninkii maskiinka ahaa oo illaah shubankii ka bogsiiyey, damaciisiina u aqbalay ayaa maalin kale la kulmay ninkii wadaadka ahaa oo isla mawduucii ka hadlaya oo leh hadaad hal neef bixiso illaah 10 buu ku siin iyo wax la mid ah. Ninkii maskiinka ahaa ayaa intuu soo booday yidhi: “Sheekhow arinta aad sheegaysaa walahi waa run laakiin shuban xanuun badan baa ka horeeya ee ha la ogaado”. Sheekadan murtida xambaarsan ee sheikh Axmed Makaahiil waxay soo koobtey dhamaan halganka iyo duruufahiisa. “Xoriyadu waa shay aan wax loo dhigo la arag laakiin dhib badan baa ka horeeya ee ha la ogaado hano lagu talo galo waayo bilaash cisi iyo sharaf laguma helo ee naf iyo maal in loo huro bay u baahn tahay. Sheekh axmed ayaa murtidan ku soo koobay halganka ka socda Ogadeniya in hawl adagi ka horeyso.
Sidoo kale waxaa isna goobta hadalo dhaxal gal ah ka soo jeediyey Xaaji Axmed Nuur Xiirey oo ka soo xajiyey wadanka Maraykanka.
Dhinaca kale waxaa goobta shirka joogay wariyayaal ka socda TVga Royal ee afka soomaaliga ku hadla. Ugu dambeyn waxa shirkii lagu soo gunaanaday is afgarad iyo is fahan dhinac kasta ah. Waxa lagu heshiiyey in midnimada la xoojiyo, in is jacaylka shacabka dhexdiisa laga shaqeeyo iyo in cadowga gacan bir ah lagu qabto noocuu doonaba ha ahaadee. ka dib waxaa lagu kala tagey qalbiyo xaadhan oo naxli iyo xigdi ka nadiif ah balse jacayl iyo gacaltooyo ay buuxisay.
Xaji Ali yare/ONA